एमाले अध्यक्षसँगै यी पदमा हुँदै छ निर्वाचन, ओलीले छानेका बाहेक क-कसले दिए उम्मेदवारी हेर्नुस् ! - fairnepal.net
एमाले अध्यक्षसँगै यी पदमा हुँदै छ निर्वाचन, ओलीले छानेका बाहेक क-कसले दिए उम्मेदवारी हेर्नुस् !
FN November 29, 2021	No Comments
चितवन । नेकपा (एमाले)को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका लागि दर्ता भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको छ।
एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको उम्मेदवारको नामावली अनुसार अध्यक्ष सहित केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचन हुने भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चयन गरेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बाहेकका नेताले पनि उम्मेदवारी दिएपछि निर्वाचन हुने भएको हो।
अध्यक्षमा ओली र भीम रावलको उम्मेदवारी परेको छ। रावलले उम्मेदवारी दिएपछि अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुने भएको छ।
त्यस्तै, उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसालले उम्मेदवारी दिएपछि निर्वाचन हुन लागेको छ। यसअघि ओलीले नाम सार्वजनिक गरेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्।
एमाले सचिवमा पनि चुनाव हुने भएको छ। सात जना सचिवका लागि नौ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सचिवमा भीम आचार्य, टंक कार्की, टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्यालको उम्मेदवारी परेको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शंकर पोखरेल, सचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
यससँगै विभिन्न केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि विभिन्न समूहमा निर्वाचन हुने भएको छ। ८४ जना खुला सदस्यमा ८९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले प्रस्ताव गरेका बाहेक पदमराज जोशी, सुरेन्द्र मानन्धर, कमल तिमिल्सिना, नरेश खरेल र निर्मल भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका छन्।
खुला महिलामा पनि निर्वाचन हुने भएको छ। ५३ जना सदस्यका लागि ५६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले प्रस्ताव गरेका बाहेक उषाकिरण तिम्सेना, अर्चना गहतराज र भगवती न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रदेशतर्फ पनि थप उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश १ मा खुला ६ जनाका लागि नौ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले छानेका बाहेक दुर्गाकुमार थापा (स्वस्ति), धर्मराज निरौला र पर्शुराम अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनीमा भने थप उम्मेदवारी परेको छैन। तीनै प्रदेशमा ओलीले छानेका नेता नै केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
त्यस्तै, बागमतीमा पनि ६ जना सदस्यमा आठ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले छानेका बाहेक केदार क्षेत्री र रामवीर मानन्धरले उम्मेदवारी दिएका छन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि निर्वाचन हुने भएको छ। कर्णालीमा ६ सदस्यमा सात जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले छानेका बाहेक योगेन्द्रबहादुर शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
सुदूरपश्चिममा ६ सदस्यका लागि नौ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले छानेका बाहेक कृष्णप्रसाद जैशी, दीपकप्रकाश भट्ट र सहदेव बोगटीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
सुदूरपश्चिममा महिला सदस्यका लागि पनि निर्वाचन हुने भएको छ। तीन सदस्यका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले छानेका बाहेक कलशादेवी महरा, पशुपति कुँवर र मन्जु मलासीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यस्तै, आदिवासी जनजातितर्फ पनि निर्वाचन हुने भएको छ। १७ सदस्यका लागि १९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। ओलीले छानेका बाहेक निर्माण बुढा र सुवास कर्माचार्यले उम्मेदवारी दिएका हुन्।
मधेशी खुलातर्फ पनि १३ सदस्यका लागि १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। ओलीले छानेका बाहेक बिल्टु यादव र शम्भुप्रसाद गुप्ताले उम्मेदवारी दिएका हुन्।
यससँगै सम्पर्क समन्वयको महिलामा एक सदस्यका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ओलीले कल्पना थापाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने जानुका बुढाले पनि उम्मेदवारी दिएकी छन्।
दलिततर्फ पनि निर्वाचन हुने भएको छ। आठ सदस्यका लागि ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। ओलीले छानेका बाहेक अनुभूति बम नेपाली, तिलक विश्वकर्मा र नरबहादुर विकले उम्मेदवारी दिएका छन्।
थारू र मुस्लिममा पनि निर्वाचन हुने भएको छ। ओली छानेका बाहेक थारूमा जयप्रकाश थारूले र मुस्लिममा नजिर मियाँले उम्मेदवारी दिएका छन्।
आज राति ९ देखि १ बजेसम्म मतदान हुनेछ। त्यसपछि लगत्तै मतगणना हुने एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
यी हुन् ओलीले छानेका १९ पदाधिकारी
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीले के जवाफ दिए ? हेर्नुस्
एनआरएनमा अबको अब्बल नेतृत्व : महासचिव पदमा खरेलको उम्मेदवारी
१४औं महाधिवेशनका लागि जितजंगले गरे उम्मेदवारी घोषणा,…
कांग्रेस १४ ‍औं महाधिवेशन: अहिलेसम्म कुन पदमा कसको…
Previous Previous post: कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिकामा हेरफेर, अब उद्घाटनपछि मात्र मनोनयन दर्ता
Next Next post: प्रसाद खप्तरी मगरको नयाँ गीत ‘हितैको मायाँलाई’मा प्रकाश र जुना (भिडियो)